“Markaan ciyaaraha ka fadhiisto … Waxaan dhihi doonaa waxaan tababaray xiddigan” – Zidane – Gool FM
(Madrid) 01 Seb 2020. Tababaraha reer France iyo kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsanyahay la shaqeynta laacibka qadka dhexe reer Germany ee Toni Kroos.
Wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay tababare Zinedine Zidane, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Toni Kroos kaliya ma ahan mid ka mid ah afarta hoggaamiye ee kooxda, laakiin wuxuu ku bixiyaa waxyaabo badan garoonka dhexdiisa, wuxuuna leeyahay awood lagu dhasho”.
“Kroos noloshiisu waa kubadda cagta iyo qoyskiisa, waxyaabaha kale isagu ma xiiseynayo, qof walbana wuxuu ku xasuusan doonaa Kroos inuu yahay ciyaaryahan cajiib ah iyo mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican booskiisa, waana ku faraxsanahay fikirkiisa”.
“Markii aan imid waxaan ku faraxsanaa inaan tababare u noqdo Toni Kroos, marka aan howlgab noqdo waxaan dhihi doonaa waxaan tababare u noqday Ronaldo, Bale, Modric, Ramos, iyo kuwa kale oo badan, laakiin sidoo kale waxaan dhihi doonaa waxaan tababaray Toni Kroos”.
“Waa wax weyn inaan arko Kroos oo tababar sameynaya maalin kasta, waa xirfadle aad iyo aad u cajiib badan”.